Uma uthanda ukuba bayangimema ukuba uvakashele izinkampani ezingaphezu futhi ube kude kusihlwa phezu ubhiya, uqinisekise ukuthi ufunda lesi sihloko. Kusukela ke uzofunda indlela ukulungiselela isidlo nge ubhiya ekhaya. Siqoqe ngawe ezinye izindlela ezilula, ungakwazi okuyinto sibhekane ngokuphumelelayo ngisho imfundamakhwela umpheki.
Inkukhu amaphiko usoso wesoya
Namuhla, noma ubani angaba oda isidlo ocingweni endlini futhi akazange achithe isikhathi ku ukupheka. Nokho, asikwazi ngaso sonke isikhathi ukuqinisekiswa freshness of umkhiqizo uthenge, futhi yayo izimfanelo ukunambitheka Akekho owaziyo. Ukuze iqembu yaphumelela, sinikeza wena ukupheka isidlo ezinye elula nge ubhiya ekhaya. Ukuze wenze lokhu, uzodinga:
Lungiselela kilogram of inkukhu amaphiko, ubageze ufafaze izinongo ngendlela esilindele yakho. Ngemva kwalokho, uwafake upulasitiki, engeza sauce soy, nyakazisa okuqukethwe entanyeni uthayi. Shiya amaphiko marinate esiqandisini imbala kwamahora ambalwa.
ama amathathu zihlanzekile kusukela husk, bese nquma kubo izindandatho.
Beka amaphiko kanye anyanisi phezu hlupha upheke amalahle kuze kwenziwe.
Siyaqiniseka ukuthi izivakashi bayokwazisa isidlo ku ukulungiswa okuyinto wathatha esiningi isikhathi sakho siqu.
Inyama isidlo nge ubhiya
Lesi sikhathi sikunikeza ukupheka akho ayi ngoba hlupha. Umsebenzi akuyona njengoba kunzima njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Ngakho-ke, ukufunda ngokucophelela iresiphi futhi baxhumane inyama isidlo nge ubhiya ekhaya.
Yokungalungiseleli ingulube 600 amagremu kwengaphakathi, 300 amagremu yenkomo kanye 200 amagremu nesinqumela.
Crush u hlanganise nengulube clove ezinhlanu garlic kanye kwesigamu obabayo pepper. Engeza usawoti kanye pepper ukunambitha.
Ukusebenzisa umlomo wombhobho ekhethekile ugcwalise ukugxusha amathumbu, ezimazombe wakhe njalo cm 12.
Lapho ayi zilungele, uwafake esitsheni futhi ushiye ku esiqandisini ngoba ngosuku yokuvuthwa. Ngaphambi ukupheka bhoboza inaliti isikhumba ezindaweni eziningana futhi gcoba uwoyela umkhiqizo exutshwe soy sauce. Broil appetizer eyosiwe kuze ithenda kanye ukukhonza izivakashi zayo nge ubhiya futhi sauce ozithandayo.
Lokhu appetizer nakanjani abalandeli umxhwele inyama izitsha :
Grind 500 amagremu of utamatisi kanye sihlanganise nabo spoonfuls ezintathu ibhilikotsi ujamu. Engeza ezimbili wezipuni usoso wesoya sherry futhi spoonfuls eziyisithupha umpe eyodwa lemon.
Bilisa ingxube okuholela Ufakwa ke Kilogram izimbambo oqoshiwe ukupheka kubo imizuzu engu-30.
Ngemva kwalokho, kufanele Fry epanini-hlupha kuze brown golden.
Crunchy amazambane isidlo nge ubhiya a classic uhlobo. Kunzima ukucabanga ubani owake hhayi wazama le nhlanganisela. Nokho, akuyona imfihlo ulwazi ngezingozi umkhiqizo osuphelile kithi, ukuze siphakamisa wenza owakho amazambane chips.
ukudla okusheshayo ubhiya ekhaya simiswe ngalendlela lelandzelako:
Inani kwesokudla amazambane ikhasi bese uthathe tincetu mncane. Ngenxa yale njongo, elula kakhulu ukusebenzisa ummese ekhethekile noma grater.
Geza tincetu ngamanzi abandayo bese ulinda kuze abakhwabanisi amanzi.
Mboza baking iphepha ukuphotha disk imethrikhi, ngiyibeke phezu amazambane. Ukunikeza isidlo flavour ozithandayo, ungakwazi ukwengeza noma iyiphi namakha, usawoti.
Ilungiselela chips ka imizuzu emibili kuya kweyishumi. Lokhu kuncike Usayizi batch, kanye emandleni microwave oven.
Uma kuphekeke amazambane amagejambazo kufanele ukuthole awubeka ipuleti. Khonza izivakashi isidlo nge utamatisi sauce okuzenzela.
Ayi zihambisana ubhekeni
Leresiphi kuzokusiza Ngamangala izivakashi zakho ne izitsha engavamile. Nokho, khumbula ukuthi ngokwanele ocebile calories kungathinta isithombe sakho akuyona indlela engcono kakhulu. Indlela yokwenza isidlo engabizi ubhiya ekhaya:
Ukuze isinongo ukuxubana 120 amagremu yogurt, ezine wezipuni lwesinaphi (ungasebenzisa elula noma elimbudumbudu), usawoti kanye pepper.
Thatha isilinganiso esifanele ayi okumnandi, susa iphakeji ukugoqa ucezu ubhekeni ngamunye.
awukudla Bhaka ku yokubeka wire imizuzu engaba yishumi, kuze ecolekile. Khonza ayi nge hot lwesinaphi sauce.
Onion isidlo nge ubhiya ekhaya. Isithombe kanye nencazelo
Onion amasongo Batter - it is a kwalokho emangalisayo ubhiya, okuyinto uzokwazi ukupheka, ngisho i-umpheki ongenalwazi. Indlela Yokuthola lokhu dish ulula:
Four red anyanisi Usayizi medium, msulwa husk bese uthathe izindandatho mncane. Gcwalisa izinongo nalutho ozithandayo bese uvumele ukuma cishe imizuzu emihlanu.
Ukuze uxhume sauce 200 ml ukhilimu kanye 100 g weparmesan yashizi. Engeza kubo usawoti kanye pepper. Beka i-ingxube ngomlilo bese upheka kuze ushizi siphela ngokuphelele.
Ukulungisa Batter phehla iqanda elilodwa ngamanzi ke ufafaze ufulawa kuye kanye isitashi esincane.
Shisisa amafutha epanini bese Fry kwalo onion rings, ngaphambili elicwiliswe Batter. batch ngalinye ukupheka akukho imizuzu engaphezu kuka emibili, bese ngokushesha wagqoka ithawula ephepheni.
Lapho emasongweni kuphole, ukukhonza izivakashi zabo, kanye ushizi kanye utamatisi sauce.
Ukulungiselela lezi isidlo crispy ubhiya ekhaya akuthathi isikhathi sakho esiningi.
Funda ngokucophelela iresiphi crispy izinti nizenze nathi:
amagremu 100 ibhotela okuqinile, grate u hlanganise ezimbili izinkomishi ufulawa sifted. Izandla ujike izithako ibe imvuthu, engeza 120 amagremu likabhiya, futhi uxove inhlama. Ngemva kwalokho, bopha e epulasitikini bese ubeka in esiqandisini ihora.
Chaza isipuni ushukela ezimbili nezinkezo yamanzi.
Izoqala nini esifanele, unikezele ngezinsizakalo inhlama ibe ungqimba elincanyana, awubeka isikhumba futhi gcoba amanzi amnandi.
Fafaza usawoti kanye Sesame preform, bese sibe yimichilo mncane.
Bhaka inamathela kuhhavini osuke usushisa kakade imizuzu engaba ngu-20.
Kuzodingeka ukuthi silungise nale nesitsha, kepha umphumela ngokuqinisekile sijabulise nawe. Ukuze kulungiswe isidlo esilula nge ubhiya ekhaya, udinga:
Geza bese uhlanza ifilimu isidumbu squid chitin (400 amagremu). Ngemva kwalokho, kufanele sibe yimichilo mncane futhi roll ngengxube isitashi nofulawa wombila. Ingxube ezomile ungakhohlwa engeza usawoti kanye pepper.
Ukushisa e amafutha Skillet yemifino ezijulile gazinga ke unamathela izingxenye ezincane squid imizuzu amathathu. Ngemva kwalokho, babeka isidlo nasethawuleni iphepha ukuqeda fat ngokweqile.
Beka squid ngoqwembe esikhulu, bawahlobise nge anyanisi oluhlaza bese uthele usoso wesoya.
Abangani bakho bayokwazisa appetizer vegan futhi ucele ukwabelana iresiphi nabo.
Prawns e uju sauce
Lokhu dish ngeke kusimangaze izivakashi zakho ukunambitheka ezinhle kuphela, kodwa futhi kuhanjiswa ifomu.
Lesi sikhathi sizobe ulungiselele nezimfanzi amnandi on skewers ngokhuni:
Omunye kilogram of nezimfanzi eluhlaza emagobolondweni, ehlanzekile imigomo, kanye ungakhohlwa ukususa vein emathunjini.
Amabili Chili encane khulula kusuka imbewu futhi nquma ngommese.
Ngokhuni skewers cwilisa emanzini abandayo imizuzu engu-30.
Endishini enkulu, uhlanganise ezine wezipuni kalamula, ababili wezipuni elikhuhluziwe, ababili wezipuni of uju, emhlabathini pepper kanye ezine wezipuni zamafutha. I kwaphumela ingxube marinate nezimfanzi uzilungiselele for isigamu sehora.
Nanizhite nezimfanzi on skewers bese upheka phezu hlupha imizuzu emibili ohlangothini ngalunye.
Lapho edilini yasekuqaleni usulungile, vula it out ungene ipuleti uphake.
Ushizi amabhisikidi kanye walnuts
Sifuna ukwethula kini ukuba olunye uhlobo ubhiya Ungadla. ingalungiswa kalula amabhisikidi elungisiwe, lapho surely ujabulele izivakashi zakho ekhaya.
Ukuze wenze lokhu, uzodinga:
amagremu 100 of ushizi grate.
amagremu 100 ibhotela eqandisiwe, uthathe cubes ezincane.
A ingilazi kafulawa omhlophe, ingcosana lwesinaphi powder futhi paprika, kanye usawoti, zivundulula ngesihlungo ibe isitsha.
Xhuma ukudla okulungiselelwe, engeza ingcosana upelepele obomvu.
Uxove inhlama, ulwahlukanise ku amabhola amancane. Ngamunye roll workpiece emhlabathini nati, bese ukubeka bhaka, lo isikhumba nikubeke ezinhliziyweni zenu.
Bhaka amakhukhi kuhhavini osuke usushisa kakade kuze kube Uthola luhlaza segolide.
Siyojabula uma uthanda ukulungiselela isidlo nge ubhiya ekhaya. Ungadliwa ukuthi siye eqoqwe ngawe kulesi sihloko ulula, ungakwazi kalula ukusebenza.
Umlenze eyosiwe wewundlu emgodini, futhi ezinye izindlela sokulungiselela
Ukubunjwa kwama-Slavic uthi: imigomo, izimo nezizathu. Izizwe Zokuqala ZaseSlavic
Game "matryoshka" Yini bayamangala bezinye izizwe e-Russia?